Olo-tsindrin'ny rindrina dispenser Wall Mount
Home / Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana / Faucets fandroana fandroana sensor / WOWOW Tendrombohitra famoahana savony mandeha ho azy
Mba hampihenana ny tahan'ny fifindran'ny COVID-19, tsy mila manasa tanana am-pahazotoana fotsiny fa mila dispenser savony automatique ihany koa hampihena ny mety hisian'ny fihenan-tsofina
Ny fipoahan'ny COVID-19 nahatonga ny olona handinika tsara ny olan'ny fanasan-tànana. Ireo mpamaky ny savony nentim-paharazana dia mila hikasika ny lohan'ny paompy amin'ny tanana, izay mampitombo ny valan'aretina. Indrindra any amin'ny toerana be olona toy ny trano, sekoly, toeram-pivarotana lehibe, trano fisakafoanana ary toeram-pivarotana, maro ny olona tokony handeha any amin'ny trano fidiovana ， Amin'ity indray mitoraka ity, ny mpanamory savony automatique dia mora kokoa. Apetraho eo ambanin'ny dispenser savony fotsiny ny tananao, hapetaka avy hatrany ilay vahaolana savony, hampihenana ny fikasihana, ary hiarovana ny fahasalaman'ny olona. Mampiasà teknolojia maoderina mba handresena ny COVID-19. Manomboka amin'ny fanasana tànana tsara, ny dispenser amin'ny savony mandeha ho azy dia miaro ny olona amin'ny otrikaretina
SKU: Dispenser savony mandeha ho azy Sokajy: Faucets fandroana fandroana sensor, Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana Tags: Trano famarotana ara-barotra, Sompatra Foam, Sofotra miorina, Soba toaka